कालो चस्मा निलो पल्सर « Loktantrapost
कालो चस्मा निलो पल्सर
८ आश्विन २०७३, शनिबार १०:०१
त्यो मान्छे सुरुङ्गादेखि हाम्रो पिछा लागेको छ । भर्खरै विवाह गरेर माइतबाट फर्केकी रिताले मोटरसाइकल चलाइरहेको आफ्ना श्रीमानसँग भन्छे– नत अगाडि जान्छ , नत धेरै नै पछाडी छ । म अघिदेखि याद गरिरहेकी छु । विश्वास नलागे लुकिङ ग्लासबाट पछाडी हेर्नुस् त ।
रिताको श्रीमान् लुकिङ ग्लासबाट पछाडी हेर्छ ? भन्छ ‐ हैन तिमीलाई त्यस्तो लागेको होला, हाम्रो किन कसैले पिछा गरोस् त्यता वास्तै नगर । श्रीमानको कुरा सुनेपछि रिता एकछिन चुप लाग्छे । तर, उसको मन मान्दैन, करिव छ किलोमिटर अगाडि पुगेपछि रिता फेरि पछाडि हेर्छे । त्यो निलो पल्सरमा त्यही मान्छे छ । कालो चस्मा लगाएको छ । हेल्मेटको सिसा हावाले पूरै पछाडी फर्काको छ । एकोहोरो त्यो पछाडीबाट आउने मान्छेले रिता नै हेरे जस्तो लाग्छ । रिता फेरि आफ्नो श्रीमानसँग गुनासो गर्छे अलि छिटो चलाउनुन, त्यो मान्छे अझै पछाडी नै छ ।
रिताको श्रीमानले फेरि एकपटक लुकिङ ग्लासबाट पछाडी हे¥यो । एक्सिलेटर बटा¥यो । तर, उसको स्प्लेन्डर जति बटारे पनि पछाडिबाट आउने गाडीको तुलनामा कम नै गुड्छ भन्ने थाहा थियो । श्रीमतीको कुरा टार्न नसकेर मात्र उसले त्यो कदम चाल्यो । रिताले फेरि पछाडि हेरी र श्रीमान्सँग भनी– अलि टाढा छ त ? आउँदैछ । रिताको श्रीमानलाई उसको गाडी र श्रीमतीसँग व्रmमश रिस उठ्दै आउँछ । उसलाई त्यसरी गाडी चलाउन मन लाग्दैन । उसले यति बेस्सरी कहिल्यै गाडी चलाएको थिएन । रिता फेरि बोल्छे– अलि ध्यान दिएर चलाउनु है अगाडि पुल छ ।
रिताको श्रीमान्ले एक्कासी गाडी रोक्छ र हेल्मेट खोलेर लुकिङ ग्लासमा राखी पछाडि हेर्छ । खै कहाँ छ, को हो पिछा गर्ने ? म छिटो चलाउनु कि ढिलो ? यति ठुलो आवाजले रिताको श्रीमान्ले कहिले बोलेको थिएन । रिता पछाडि हेर्छे तर त्यो मान्छे पछाडि थिएन । अघिसम्म पछाडि नै थियो । सुरुङ्गादेखि नै मैले याद गरेकी रिता श्रीमान्लाई विस्तारै जवाफ फर्काउँछे । श्रीमान् फेरि हेल्मेट लगाउँछ र मोटरसाइकल किक हान्छ । गाडी स्टार्ट हुन निक्कै समय लगाउँछ ।
श्रीमान्लाई आफू एकदमै हीन भएको अनुभव हुन्छ । बेस्सरी किक हान्छ । तर, गाडी स्टार्ट हुन मान्दैन । गर्मी र रिसले ऊ पसिनै पसिना भई सक्यो । पछाडि बाटोमा आँखा गाडेर बसेकी रितालाई देख्दा त झन् ऊ रिसले चुर हुन्छ ।
तिमीलाई पछाडि नहेर भनेको लाग्दैन Œ यहाँ हालत हेर त मेरो । यो सबै तिमीले गर्दा भएको हो । काम छैन नचाहिँदा मान्छेहरु याद गर्दै बस्छौ, जाउ त्यसैसँग । श्रीमान्को अन्तिम वचनले रिताको मनमा हिर्काउँछ । आफ्नो व्यागमा रुमाल खोज्न थाल्छे तर फेला पर्दैन । श्रीमान्ले उसलाई आजसम्म यति ठुलो स्वरमा बोलेको थिएन । उसका आँखाबाट आँसु झर्छन् । तर, पसिनाले लतपत उसको अनुहारमा ती आँसु श्रीमान्ले देख्दैनन् ।
बाइक स्टार्ट हुन्छ । पछाडि बस्छे । उसले दुईवटा कुरा अठोट गरी । एक उ अब श्रीमान्सँग बोल्नेवाल छैनन् । दुई बिर्सेर पनि पछि हेर्नेवाला छैन । तर, यो पछिल्लो निर्णय धेरैवेर टिक्न नपाउँदै उसलाई खुलदुली हुन्छ । त्यो मान्छे अझै पछाडि छ जस्तो उसलाई लाग्छ । तर, ऊ हेर्दिन । श्रीमान् अगाडिबाट रितासँग माफी माग्ने प्रयत्न गर्दैछ । उसलाई पछुतो लाग्न थालिसकेको छ । त्यति साह्रो त भन्न नहुनेथ्यो । विचार गर्छ । तर, रिता सुनेको नसुन्यै गर्छे । श्रीमान्को कुरामा चासो नहुनुमा रिताको अर्कै समस्या छ । रितालाई बस यही पीरले सताएको छ कि त्यो मान्छे अझै पछाडि छ कि छैन । तर, हेर्न चाहन्न । अटेरी गरेर अगाडि मात्र हेरिरहन्छे । तर, यो स्थिति धेरैवेर टिक्न पाउँदैन । रितालाई पछाडि नहेरी सास फेर्न पनि गाह्रो भएको अनुभव भयो । विस्तारै पछाडि हेर्छे, रिताको शङ्का ठिक सावित हुन्छ । त्यो मान्छे अझै पछाडि नै छ । हो, त्यही मान्छे हो निलो पल्सर कालो चस्मा । तर, यो पटक उसको अनुहारमा एउटा विचित्रको भाव देखिएको छ, फेसबुक म्यासेन्जरमा कहिले च्याट गर्दा उसकी एउटी साथी उसलाई त्यस्तो अनुहार गरेको स्माइली पठाउँथी । दाँत देखिएको एउटा पहेँलो रङको टाउको । रितालाई त्यो मान्छेले त्यस्तै अनुहार बनाएजस्तो लाग्छ । तर, ऊ धेरैवेर पछाडि हेर्दिन ।
श्रीमान् अनेक कुरो गरेर फकाउन खोजिरहेको हुन्छ । तर, रितालाई उसका कुरा मिथ्या लाग्छन् । उसलाई फेरि एकपटक हेरेर त्यो मानिसको अनुहारको भाव पक्का गर्न मन लाग्छ । ऊ पछाडि हेर्छे । उसलाई देख्छे । त्यो मानिस अझै पछाडि नै छ र हाँस्दै छ । रिताको रिस एकैसाथ हराउँछ । उसलाई त्यो मानिस हाँसेको देखेर आफै पनि हाँस उठ्छ । ऊ विस्तारै हाँस्न थाल्छे । त्यो मानिस पनि हाँस्छ । रिता हाँसो थाम्न सक्दिन । ऊ अब पटक–पटक पछाडि हेर्छे, हाँस्छे । रितालाई हाँस्नु ठिक हैन जस्तो लाग्छ । तर, ऊ फेरि पनि पछाडि फर्केर हाँस्छे । त्यो मानिस पनि हाँसिराछ । श्रीमानलाई लाग्छ रिता उसैले फकाउन गरेका कुनै कुरा उपर हाँस्दैछे । तर, सत्यता रितालाई थाहा छ । केहिवेरमा विर्तामोड आइपुग्छ । भीडमा त्यो मानिस कतै वेपत्ता हुन्छ । रिता केहिवेर पछाडि हेर्छे ? श्रीमानसँगको रिसलाई जारी राख्छे ।